SKU: 94-07-5. Category: Ọla abụba
Enwu nke Synephrine bụ ihe na-emekarị alkaloid nke a na-ewere dị ka ihe na-akpali akpali ma ọ bụ nootropic n'ihi na ọ na-emetụta ụda dị arọ na usoro ntụgharị uche n'ime ụbụrụ. Dika a na-achọta Synephrine ntụ ntụ na ụfọdụ osisi na anụmanụ, akpan akpan ọtụtụ Synephrine ntụ ntụ a na-enweta na ihe nchịkọta nri na-esite na Citrus Aurantium Osisi a na-akpọkarị Bitter Orange wepụ.
Iji mee ihe nke metabolic na ike nke Synephrine ntụ ntụ, ọ kachasị ihe mbụ n'ụtụtụ ma ọ bụ 15 - 30 nkeji tupu emega ahụ. A ghaghị iwere ihe mgbakwunye ihe mgbakwunye na ihe na-abaghị uru nke nwere Synephrine ntụ ntụ na mmiri tupu emega ahụ. Nke kachasị mkpa bụ 15 - 25 milligrams kwa na-eje ozi.
E wezụga ikike iji gbochie agụụ, Synephrine ntụ ntụ na-egosi ihe ngosi nke inwe ike ịba abụba n'onwe ya. Ya mere, enweghi ike ikpochapu ntụpọ Synephrine ka ọ bụrụ abụ ọkụ. Site n'iji ntụ ọka Synephrine na anụ ọkụ na-abụba, ị ga-eche na ị ga-anwa anwa anwa ụra n'ụbọchị gị dịka ị ga-anọgide na-adịkwu ogologo oge ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị gaghị eri nri karịa ihe ị na-eme kwa ụbọchị.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị dị ka ọtụtụ ndị mmadụ, ị gaghị achọpụta ihe dị ukwuu mgbe ị na-ewere Synephrine ntụ ntụ Ọtụtụ n'ime ha na-akọ akụkọ banyere ntakịrị mmụba na ume ọ dịghị nke ọ bụla n'ime mmiri na-ejikọta ya na stimulants (jitters, ọgbụgbọ, ngwa ngwa ngwa ngwa, wdg. ).
Ntụziaka ntụziaka Synephrine Raw Powder: